Fitaovana vaovao miady amin'ny fanolanana
Ny SafetyNet dia manome kaopy na tapa-kazo izay, rehefa ampidirina amin'ny zava-mahadomelina "mpamorona" toa ny GHB, rohypnol, ary ketamine, dia miova loko avy amin'ny mangarahara ho volomparasy, mampandre ny mpiboboka fa misy zava-mahadomelina napetraka ao anaty zava-pisotro.
"Ny tanjona dia ny fampahafantarana fa nisy fanandramana natao tamin'ny zava-pisotro misy alikaola, mampihena ny mety hisian'ny fanafihana ara-nofo na fakana an-keriny," hoy i Reena Sehgal, mpisolovava monina any Los Angeles misolo tena ny SafetyNet. "Afaka miala sasatra kokoa ny olona amin'ny fahafantarana fa ny zava-pisotro misy azy dia hampandre azy ireo raha misy manandrana manitsakitsaka ny zony."
Ny Amerikana iray dia iharan'ny fanolanana na fanafihana ara-nofo eo ho eo isaky ny 68 segondra, araka ny filazan'ny fikambanana miady amin'ny fanafihana ara-nofo RAINN, miaraka amin'ny dimy isan-jaton'ny fanafihana ara-nofo voalaza fa voasokajy ho vokatry ny zava-mahadomelina. Ny vokatra, izay nankatoavin'i John Hopkins, dia haseho amin'ny gala.
Ny kaopy sy ny stirrers SafetyNet dia ho azo ara-barotra rehefa azo antoka ny famatsiam-bola. Ny vokatra amin'izao fotoana izao dia antenaina ho tonga any amin'ny talantalana eny amin'ny fivarotana enta-madinika, fivarotana zava-pisotro misy alikaola ary any an-toeran-kafa amin'ny Mey 2022.
"Ny SafetyNet mihitsy dia hampihena ny herisetra ara-nofo amin'ny alàlan'ny fahitana ireo zava-mahadomelina ireo, fa angamba ny zava-dehibe kokoa aza, ny fisiany dia ho toy ny fanakanana," hoy i Sehgal. “Hieritreritra indroa ny mpanolana sy ny mpanondrana olona raha misy vokatra azo alaina izay hisambotra azy ireo amin'ny hetsika.”
Hahazo tombony amin'ny RAINN, Love Fearless, ary fikambanana tsy mitady tombony hafa natokana hampitsaharana ny herisetra ara-nofo sy ny fanondranana olona ny vola azo avy amin'ny hetsika fiantrana.
Ny SafetyNet dia tohanan'ny Sehgal Law PC, Lastine Impressions, ary Broken Vase Productions. Ny tanjony dia ny hampihenana ireo isa ireo ary hitondra vokatra eny an-tsena izay ahafahan'ny olona miala sasatra amin'ny fahafantarana fa azo antoka ny fisotroana azy.
Previous Manakana ny fiparitahan'ny valan'aretina izao
Manaraka WTTC Global Summit 2022 Manila nahemotra